"Karcher" भाप क्लीनर। विक्रेता र मालिक को समीक्षा
माटो ... म कुनै संग बस्न चाहँदैनन्। केही मानिसहरू फोहोर कुराहरू संग मौलिक के - म नयाँ थियो, तर जनसंख्या को थोक आफ्नो सम्पत्तिमाथि अब को माटोको raids लडिरहेका बचत गर्ने प्रयास गरिएको छ। सिद्ध हरेक विवरण ल्याउन प्रयास, मेरो-स्वच्छ, धुन, सफा, र त्यसपछि फेरि मेरो-सफा: र शुद्धता लागि युद्ध सुरु गर्नुहोस्। शक्तिहरू कुनै थप हुँदा, हामी रसायन को, कहिलेकाहीं एकै समयमा, यो पायो के snapped कुनै पनि स्थान dissolving सक्षम, र वाहेक विषाक्त वाफ संग छिमेकी सबैलाई विष गर्न। र तपाईं के गर्नुहुन्छ?
यो धेरै सरल छ। लगभग एक सय वर्षसम्म त्यहाँ abatement प्रविधिहरू सादा पानी बिन्दु उम्लिरहेको ल्याइएको हो। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो लगभग पचास वर्ष थियो, यी प्रविधिहरू एउटा सानो र संकुचित इकाइहरूमा हाम्रो अपार्टमेन्ट र घरहरू समावेश। यी उपकरण मा बजार नेता कम्पनी अल्फ्रेड Kärcher GmbH एन्ड Co.KG (जर्मनी), हुन घर र बगैचा मा अनुकूलन कामको लागि कला मा विशेषज्ञता मानिन्छ। यो सबैका कम्तिमा एक पटक उनलाई साधन देखेको जस्तो देखिन्छ उज्ज्वल पहेंलो रंग को कार Washes मा, सपिङ्ग मल र विमानस्थलको तिनीहरूले सजिलै माटो सफा गर्न काम सामना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ मा।
स्टीम क्लीनर "Karcher" (मालिकको समीक्षा यसको बारेमा कुरा) कुनै पनि प्रदूषण को परिसर सफाई मा पर्याप्त सहायता प्रदान गर्न सक्षम छ। यी एकाइहरु सबैभन्दा घर लागि प्रस्तुत उत्पादनहरु को कम्पनीको पोर्टफोलियो मा किनेको हो। दोस्रो स्थानमा भ्याकुम क्लिनर "Karcher", त्यसपछि एक मिनी-लुगा धुने र टीन उपकरण धोइदिनुभएर छ। यो निगम वाहन को रिलीज सीमित थिएन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, तिनीहरूले सफलतापूर्वक उपभोक्ताहरु र सबै सम्बन्धित उत्पादनहरु rags र डिटर्जेंट, खत्म नलिका र उपकरणहरू को एक किसिम ले, प्रतिनिधित्व गर्छ।
को भाप क्लीनर "Karcher" विचार गर्नुहोस्। पहिले नै प्रयोग भएका उपकरणहरू नाटकीय भिन्न ती देखि प्रतिक्रिया। यो आम लागि कारण। उहाँले कसैले बस negativity वरिपरि देख, एक ईन्जिनियरिङ् Marvel दे भन्दा केही साँच्चै थप प्राप्त गर्न चाहन्छु, र पाठ्यक्रम, त्यहाँ तिनीहरूलाई unconditionally प्रेम गर्नेहरूलाई छन्। हामी व्यक्तिगत predilections देखि सुरु गर्न, सबै फाइदा र बेफाइदा विचार गर्न प्रयास गर्नेछ। मिसिन को धेरै प्रकार, स्टीम क्लीनर को एक लाइन मा प्रस्तुत "Karcher" (समीक्षा विक्रेता मदत गर्न सक्छ) कुनै पनि आवश्यकता आफ्नो उपभोक्ताहरु पाउन सक्षम छ, विशेष, एक मिनी-मोडेल (अनुसूचित जाति 952) सानो स्पेस वा सानो परिवार, मध्यम लागि (एससी 1.020) प्रस्तुत र शक्तिशाली (एससी 6800 सी) उच्चतम स्तर मा एक वसन्त सफाई उत्पादन सक्षम।
शक्ति मतभेद र तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं सुरक्षित गर्न, र अलग आवश्यक उपकरण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ जो भाप क्लीनर "Karcher" नलिका विभिन्न सेट को (विक्रेता को समीक्षा), को राशि बाहेक। अद्वितीय र अकाट्य नकारात्मक एकाइहरु, खरीदार र विक्रेता दुवै द्वारा चिन्ह लगाएका छन्, यो उपकरण संकुचित सङ्कलन गर्न असम्भव छ। विशेष हामी अन्य ब्रान्डहरु को इकाइहरूमा गरेको छ को रूप मा, बिजुली Babin मा पुल गर्न नसक्नुको बारेमा कुरा गर्दै छन्। धेरै आफ्नो सबै सामान भण्डारण गर्न एक विशाल बक्स राख्न बाध्य छन्।
अन्तर्गत दबाबको तातो बाफ जेट दायर मात्र "विश्रामहरू" छेउमा एक स्थान, तर पनि यो कहाँ अन्य मिडिया (चर्किएको, जोइन्टहरूमा, आदि ..) उठयो सक्दैन प्राप्त गर्न सक्षम छ। सबै तपाईं के गर्न बाँकी छ, एक कपडा संग माटो संकलन गर्न छ। यो आफैमा वाफ बन्नु हुनेछ कि धेरै विश्वास छ, तर यो एक मिथक छ। घुलनशील भाप क्लीनर छ कि सबै माटो, तपाईं संकलन गर्न, तर प्रक्रिया सरल छ। distilled संग सादा पानी प्रतिस्थापन, तपाईं छोडपत्र को संभावना (यो धेरै उपभोक्ताहरु गुनासो) हटाउनु। मात्र "Karcher" को खेत मा मदत छैन - यो भाप क्लीनर कि थप्दा लायक छ। भ्याकुम क्लिनर, फलाम, wiper, तल्ला पोलिशर र थप तपाईं खेत मा अमूल्य सहयोग हुनेछ।
विरोधी पर्ची चटाई: चयन विशेषताहरु
समीक्षा सिक्ने। Furby - खेलौना को एक नयाँ पुस्ता
स्टीम भुई पुछ्ने साधन "Kärcher" - सही विकल्प
सेतो मोजा धुन कसरी? सेतो कुराहरू लागि लुगा धुने पाउडर
बुनाई मिसिन "विलो": विवरण, सञ्चालनको सिद्धान्त, को कपडा को चौडाई
झिंगा र मकै संग सलाद
काट लागि बन्चरो कस्तो हुनुपर्छ?
कति उडान परिचारक ले "Aeroflot" छन्?
DIR-615: फर्मवेयर, हार्डवेयर सेटअप
तयारी "Levitra": समकक्षों। "Levitra": समीक्षा
"1 मा साफ रेखा 5": समीक्षा। स्क्रब जेल + + "शुद्ध लाइन आदर्श छाला51 मा।" मास्क
भाषा पट्टी कम्प्युटरमा के हराएको छ भने?
Conditionals: सामान्यतया प्रयोग र प्रकार
इलेक्ट्रोनिक चुरोट Eleaf जी एस: समीक्षा र विवरण
गोसबम्पहरू हातमा: कसरी यो सम्झौता गर्ने?
ताराहरू Danielle Panabaker सबै